Akwụkwọ Dan Morrow na Martech Zone |
Edemede site na Dan Morrow
Dan Morrow bụ Director nke Ahịa Ahịa maka Odyssey, usoro ihe omuma nke ndi mmadu maka otutu puku mmadu ruru nde miliyon iri ato. Odyssey na - emeputa ihe di nkpa na odinyere n’ime obodo, nke ahu bu ihe ndi ahia choro; ịdị mkpa ma mee ka ndị mmadụ soro ha. Site na itinye ụdị aha na mkparịta ụka site na iji ọdịnaya afọ na vidiyo, anyị na-enyere ha aka ime nke a na ndị na - agụ akwụkwọ a.
Atụmatụ 3 iji dokwuo anya nke aghara nke ire ahịa na Millennials
Fraịdee, June 3, 2016 Fraịdee, June 3, 2016 Dan Morrow
Gịnị n'ezie bụ otu puku afọ? Nke a bụ ajụjụ a na-ajụkarị n’ụwa niile. Maka ụfọdụ, ọnụọgụ mmadụ a bụ enweghị mmetụta, umengwụ na enweghị amụma. Nye Odyssey, anyị na-ahụ ka ha nwere mkpali, selfaware na nke a na-ahụ anya. Ọgbọ ụfọdụ na-abanyekarị n'ụkpụrụ ụfọdụ na atụmatụ iji mee ka uche ha nwee ike bụrụ isi. Ọgbọ puku afọ a adịghị iche, anyị nọkwa ebe a ịgwa gị puku afọ iri abụghị otu nke dabara na ha niile. Nhazi onwe bu